Ukudla okuyintandokazi engakhula ngizikhuluma - kuba nati kaphayini. Indlela ukuhlanza futhi ukuthi ungawukhipha kanjani umucwana kubo, sasazi kusukela zisencane. Ekwindla zonke sikulindela sokuvuthwa Izigaxa, egijima ezungeza ehlathini, enethemba kokukokoda ukhuni, luzowa phezu izicucu okungenani ambalwa. Uma abafana wakwazi ukuthola futhi amaphuzu umsedari Izigaxa, kwakujabulisa Imininingwane. Okuluhlaza zikaphayini Izigaxa unamandla kakhulu, ungalibali, futhi nje ukuhlanza izandla abo ukuze nati akunakwenzeka. Kodwa thina, izingane ihlathi, wayazi kahle ukuthi ukuhlanza nati kaphayini. Ukuze wenze lokhu, wenze umlilo futhi eyosiwe uhlevane amazambane fresh umlotha lwaluyophola umlilo. Umlilo bashisa resin Bump wakwambula, futhi kungenziwa savored ngisho nuts yobisi.
Kodwa okumnandi kakhulu zikaphayini Izigaxa - it is abilisiwe. nephunga labo elimnandi - iphunga ebuntwaneni. Ukupheka uhlevane, udinga Thenga kakhulu nebhakede ubudala noma pan, wafaka emuva kokuvuna, uthele amanzi, uvale ungqimba phezulu fresh utshani obuluhlaza basha baqothuka. Manje sidinga ukwakha umlilo futhi hang ibhakede phezu komlilo. It uhlala impela kancane, emanzini amathumba uhlambulule zonke resin ukuthi Foam futhi angena utshani, futhi uhlevane babe bluish-pink, okumnandi elibi, ihlanzekile. simnandi kakhulu, eziwusizo, futhi akukho lutho izandla nobuso e resin. Namuhla, ngibuyele ekhaya, ngiyajabula ukubheka imisedari esezikhulile. Nalapha futhi, indlela eminyakeni eminingi edlule, sizakwehla ehlathini, Shishkarev - ukukhiqiza zikaphayini nuts. Indlela ukuhlanza Izigaxa, sikhumbula kahle.
Lo mkhiqizo iye yatha- hhayi kuphela ezweni lethu kodwa futhi emhlabeni wonke. Namuhla nati kaphayini angathengwa ngasiphi esitolo. Ngokwenza ukuthenga, khumbula ukuthi akuwona wonke ukuwa nuts esitolo kusukela ehlathini laseSiberia. amaqoqwana elikhulu nokusanhlamvu kuvela China (umsedari Manchurian) nokusuka Italy (nati Italian zikaphayini zikaphayini nuts). Shelled zikaphayini nuts ngobuningi ngaleso ethengisa okudayisa kungavunyelwe, ngenxa yokuthi ukuthi umkhiqizo iqukethe semali kawoyela isiwohloka ngokushesha. imikhiqizo Oluphakhejiwe has elinganiselwe kakhulu eshalofini yokuphila, futhi ukudla nge ebabayo nut Rancid, ungakwazi konakalisa unomphela isimo, kanye nezempilo.
Ngakho, kufanele uzivikele kanjani wena nabathandekayo ngokusebenzisa umkhiqizo yekhwalithi ephansi, kufanele athenge uhlevane isivuno sonyaka samanje noma amantongomane ongahluziwe, futhi idili on umkhiqizo ewusizo ngempela. Okhokho bethu wayekwazi ngokushesha ahlanzekile nati kaphayini - bamane kudingeka flip.
Ukuchofoza nuts - obangela emnandi, kodwa lokho kuyingozi ngoba amazinyo. Lena kuphela squirrel uthole zonke kumnandi, futhi thina amandla nuts uthele kangcono amanzi abilayo imizuzu 3-5 ke sokukhipha amanzi futhi ome nati kancane. Manje inqubo ngizoya mnandi kakhulu.
Ngo ukupheka, futhi embonini kabanzi kondirskoy zikaphayini nuts. Indlela ukuhlanza lezi izithelo okumnandi kusuka kumasistimu asebenzayo? Esikhathini zezimboni ukuziphilisa zisebenzisa imishini ekhethekile le njongo. Ukusakaza evuthayo Nuts air hot, kuchotshoziwe ukuhlanzwa kusukela amafraktjhini phezu isihlukanisi. Ngaphezu kwalokho reheated, hulled kusukela ifilimu ahlukaniswa, ngamanzi, omisiwe, ekuhlungeni ngezandla Kwenziwa nokulawula, bese phama iphakethe nge logo "Pine nati".
Indlela ukuhlanza nati ekhaya? Uzoba ukuzama izindlela eziningana bese ukhetha efaneleka kakhulu futhi elula. Ukuze usule esincane nuts ukupheka ukudla noma ukuze isetshenziswe ngezinhloso ayeyisimonyo namakhambi okwelapha kungenziwa akhishwa kusukela masher garlic noma alingise salokhu elinye ithuluzi Ukugunda. Kukhanseliwe nuts ezomile kangcono, zingabantu plastic ngaphansi, kanye igobolondo kungenziwa kalula uhlukane core. Ikhenela futhi ufuna ukusula, khona-ke kuyadingeka ukuba kancane Fry, omile futhi exfoliate ifilimu izandla. izikhwebu shelled kungenziwa ofakwe amanzi abilayo, ifilimu kalula zingamuka, ahlukaniswe egeza.
Abawandulela nokuqala zomsebenzi
Amathiphu cottagers. Ukwakha kusukela polycarbonate zokugcina